Izindaba - Tube Mills & Roll Owenza Lines
Tube Mills & Roll Owenza Lines
Izigayo ze-Tube kanye nolayini abakha imigqa benza ukubhangqa kwemvelo. Kanjalo nemigqa yokwakha roll kanye nezigayo zamathubhu.
Umphumela osheshayo wokucabangela lezi zihloko ezijwayelekile ngokulandelana okuguqukayo ukuguqulela ekugcizeleleni: kwinani eliphelele kanye nokuhlukahluka kwemikhiqizo efrintiwe ezinqoleni zohlobo lomhlaba nasemigqeni yezicabha yama-helicopter blade, amasistimu wokuqongelela izimoto nezitimela.
Ukube bekunokucabanga okunje ngohlu olungenalutho, imikhiqizo eyakhiwe ngama-roll ibizoba yilungu lokuhola. Olunye uhlu olukhulu lungabhalwa izimboni ezingathikamezeka-empeleni zikhubazeke-ngaphandle kwazo. Vele, kungashiwo okufanayo ngomkhiqizo owodwa ovelele wesimo sokugaya ithubhu yobuciko. Kepha lokho kungaba ukuphindaphinda okusobala.
Izinhlobo zokugaya ezibandayo ezibandayo zingahlukaniswa ngezinhlobo eziningi, zingahlangabezana nokucubungula okuhlukile kudinga ukwenziwa ngokwezifiso. Ngokuya ngamazinga ahlukile wokuhlukanisa uhlobo lwesigayo. Uma ukhetha ngokusho kokucutshungulwa kwepuleti, umshini wokugaya obandayo osetshenziselwa ukucubungula ishidi lensimbi kungashiswa okushisayo futhi kubande okubandayo, ngobukhulu obunembile bekesi eligingqikayo, isigayo singahlukaniswa sibe ipuleti elibandayo Izinhlobo ezimbili zezigayo ezibandayo nazo ziyatholakala.
Uma udinga umucu ogoqwe ngamakhaza ukuze uhlukanise izigayo zokugodola ezibandayo, umshini wokugaya ungahlukaniswa ube yisigayo esigingqikayo esiqhubekayo nokuguqula umshini wokugaya. Kodwa-ke, ukungezwani kwesigayo nakho kungenye yokuqukethwe okubaluleke kakhulu, izinkinga zamandla okugaya imvamisa zenzeka ekuguqulweni, kwinqubo yokugingqika ukubonakaliswa okubalulekile. Ekukhiqizweni kokugoqa okubandayo, ukugoqa okuphezulu okuphezulu kuyisici ekukhiqizeni, uma uhlelo lokungezwani lunengqondo, ungaqinisekisa ukuzinza kwenqubo yokugingqika, kanye nekhwalithi yokuqedwa kokulawula okuhle. High-ukungezwani abandayo ugingqe isigayo kungavimbela lo mkhuba ukuphambuka kusukela workpiece, futhi ngesikhathi esifanayo has umsebenzi ukulungisa ngokuzenzakalela ukuze ipuleti kweqa kungaba flat futhi sinciphise ingcindezi kweqa ukugwema ukusonteka, ukuze uthuthukise ukusebenza kahle kokukhiqiza nokwenza ngcono ukusebenza komsebenzi inani.